Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Façade တိုးတက်မှုထောက်ပံ့ကြေး • DutchtownSTL.org • Dutchtown၊ St. Louis, MO
ထောက်ပံ့ကြေးများကို ဦးစွာပထမဦးစားပေးဖြင့် အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးများကို Dutchtown CID မှ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ထောက်ပံ့ကြေးအတွက် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့ပါ။ သင် download လုပ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင် ဖြည့်စွက်နိုင်သော PDF ဗားရှင်းအပလီကေးရှင်း or အောက်ပါ အွန်လိုင်းဖောင်ကို အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားပါ။. ပြီးမြောက်သောလျှောက်လွှာနှင့်အတူ၊ လျှောက်ထားသူသည် နေရာအား ငှားရမ်းပါက လျှောက်ထားသူမှ ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက အိမ်ခန်း၏ လက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်များ၊ ဖော်ပြချက်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအပါအဝင် စာရွက်စာတမ်းအချို့ လိုအပ်ပါသည်။
Dutchtown Main Streets ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လျှောက်လွှာသည် ထောက်ပံ့ကြေးစည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့မှ ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။ မြှင့်တင်ရမည့် အိမ်ရာများ ထားရှိရမည်။ Dutchtown CID ခြေရာ နှင့် စီစဉ်ထားသော တိုးတက်မှုများသည် ဒီဇိုင်းအကြံပြုချက်များကို ပြည့်မီရပါမည်။
လျှောက်ထားသူများသည် တိုးတက်မှုကို ပြီးပြည့်စုံစေပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည် ဘုတ်အဖွဲ့ထံမှ ယာယီခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည်နှင့် အလုပ်ရက် 90 အတွင်း စတင်ပြီး ခြောက်လအတွင်း ပြီးစီးရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာ၏အတည်ပြုချက်မတိုင်မီလုပ်ဆောင်နေသောတိုးတက်မှုများသည်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းအတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။ လိုအပ်သောအချိန်ဘောင်အတွင်း အလုပ်မပြီးမြောက်နိုင်ပါက လျှောက်ထားသူသည် သက်တမ်းတိုးတောင်းဆိုရန်နှင့် နှောင့်နှေးရသည့်အကြောင်းရင်းကို အချက်အလက်များ ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်အတွက် တင်ပြပြီး ပြန်အမ်းငွေရယူပါ။ အလုပ်ပြီးသည်နှင့်၊ လျှောက်ထားသူသည် ပြီးစီးသွားသော ပရောဂျက်၏ ဓာတ်ပုံများနှင့် ပရောဂျက်အသုံးစရိတ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပါအဝင် ပရောဂျက်နောက်ပိုင်း စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရောဂျက်လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် ဘုတ်အဖွဲ့မှ တင်ပြချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသရွေ့ တောင်းဆိုထားသော ထောက်ပံ့ကြေး (ဒေါ်လာ 500 အထိ) ကို စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံစံကို အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် ဤ PDF လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ပါ။ နှင့်ကပေးပို့ info@dutchtownstl.org.
သင်၏စီစဉ်ထားသော တိုးတက်မှုပရောဂျက်အကြောင်း အတိုချုံးရေးသားဖော်ပြချက်ကို ပေးပါ။
ခန့်မှန်းထားသည့် ပြီးစီးသည့်ရက်စွဲ *
ဓာတ်ပုံများ၊ လှုံ့ဆော်မှုဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် တင်ဆက်မှုများ၊ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များထံမှ စာများ သို့မဟုတ် အခြားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများရှေ့တွင် ထည့်သွင်းပါ။
ပုံတွေမတင်ခင်မှာ တင်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း၊ လှုံ့ဆော်မှု ဓာတ်ပုံများနှင့် အဆိုပြုထားသော အလုပ်အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ ပါ၀င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပရောဂျက်သည် ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသော အဆောက်အဦရှိ လမ်းမျက်နှာစာ မျက်နှာစာအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်သည်။ ယာယီခွင့်ပြုချက်မှ ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း အလုပ်စတင်ရမည်ဟု ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ခြောက်လအတွင်း ပရောဂျက်ကို အပြီးသတ်ရမည်ဟု ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ Grant ရန်ပုံငွေကို ပြန်အမ်းငွေဖြင့်သာ ထုတ်ပေးကြောင်း နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အဆောက်အဦပိုင်ရှင်ထံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စာတစ်စောင် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)။
သင့်ဘရောက်ဆာသည် e-Signature အကွက်ကို မပံ့ပိုးပါ။
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မတ်လ 7th, 2022 .
ဒိန်းမတ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Façade တိုးတက်မှုထောက်ပံ့ကြေး